Phakamisa iplatifomu yokuthengisa kanye nabahlinzeki bendawo yokuphakamisa yePpanyeli | Imishini yaseShanggui
Ikhaya > Imikhiqizo > Phakamisa iplatifomu
Ipulatifomu yokuphakamisa isetshenziselwa ikakhulukazi ukusebenza kwe-wiring kwamafektri ahlukahlukene. Inohlelo lokusebenza lwe-wiring lokuphakamisa kwangaphambili nokubuyiselwa emuva, futhi lungasetshenziswa futhi ngokuzimela ukwenza lula ukuphathwa kwezinto zokwakha. Yehlisa kakhulu umthwalo womsebenzi wabasebenzi
Umthwalo, ukuletha lula ukulayisha ukusebenza. Ilungele ukukhiqizwa kwesisindo semishini ehlukahlukene yokusebenza ngokhuni. Kuyithuluzi elisizayo elibalulekile lamafektri amakhulu.
SHANGRUI mishini pUkukhiqizwa kwe-ROFOSIRAL kwezinto ezahlukahlukene zemishini yokukhiqiza ifenisha yokhuni, ngokwezidingo ezahlukahlukene zokwakhiwa kwamakhasimende kanye nokukhiqizwa kwemishini engeyona eyejwayelekile.